बिल गेट्स दम्पतीले कोरोना बि,रुद्ध ल,ड्न दिए १० करोड अमेरिकी डलर…हेर्नुहोस् ।
Published on: February 9, 2020
काठमान्डौ : कोरोना भाइरसको सं,क्रमण विश्वब्यापी फैलिदै गएपछि राहतका लागि विश्वकै धनी बिल गेट्सले १० करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने भएका छन् ।
यो रकम भाइरसबि,रुद्धको भ्या,क्सिन पत्ता लगाउन, भा,इरसको फै,लावट रोक्न, बि,रामीको पहिचान र उ,पचार प्र,भा,वकारी बनाउन प्रयोग गरिने भएको छ । बिल मेलिन्दा फाउण्डेशनको तर्फबाट उक्त सहयोग प्रदान गरिने भएको हो ।मेलिन्डा गेट्स बिल गेट्सकी पत्नी हुन् ।
उनीहरुले बिहे गरेको पनि २५ वर्ष भइसकेको छ । यि द,म्पत्ती विगत २५ वर्षदेखि हरेक राति भाँडा माझ्दै आइरहेका छन् । धेरैले सोच्छन् धनि व्यक्तिहरुको जीवनल निकै तामझामका साथ बित्छ । उनीहरुले केही काम गर्दैनन् । घरमा काम गर्नेहरु प्र,शस्तै हुन्छन् ।
प्रशस्तै आराम मिल्छ भन्नेहरुको लागि यो जोडी यस्तो उ,दाहरण बनेको छ । जसले आम मानिसले झै सा,धरण जीवन बिताएका छन् । उनीहरु प्रायः आफ्नो खाना आफै बनाउँछन् अनि सँगै भाँडा माझ्छन् ।मेलिन्डा पति पत्नीको काम बाँडफाँड गरेर गर्नुपर्ने कुरामा विश्वास गर्छिन् ।
यसले परिवारमा खुसी छाउने उनको भनाई छ । सन् १९८७ मा मेलिन्डा बिल गेट्सकै कम्पनी मा,,इक्रोस,फ्टमा काम गर्दा उनीहरुको भेट भएको थियो । काम गर्दा गर्दै नजिक भएका उनीहरुले सन् १९९४ मा बिहे गरेका थिए ।
४४४ किलो वजन भएको युवक आफूलाई सुहाउँदो श्रीमतीको खोजीमा
अफगानिस्तानमा भोकमरीः खान नपाएर आठ जनाको मृ’त्युदेखि ऋण तिर्न सन्तान बेच्दै अभिभावक
कोरियनसंग विवाह गरेकि सम्झना राइ कोरियन प्रहरी अधिकृत बन्न सफल, नेपाली चेलीको यो सफलता को कथा !
भारतले फेरि चाल्यो नेपाल र नेपालीका लागि यस्तो घातक कदम, आखिर के चाहन्छन् मोदी?…हेर्नुहोस!
चीनले दिल खोलेर गर्यो नेपालको तारिफ, खायो नेपाललाई कहिल्यै एक्लो नछाड्ने कसम …हेर्नुहोस!
छोरीले आफ्नो इच्छा वि’परित प्रेम विवाह गरेको भन्दै बावुले आफ्नै परिवारका ७ जनालाई ज्युँदै ज’लाए